Oromoota Calanqotti woraana Miniliikiin dhumaniif siidaan yaadannoo dhaabate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Oromoota Calanqotti woraana Miniliikiin dhumaniif siidaan yaadannoo dhaabate
Oromoota Calanqotti woraana Miniliikiin dhumaniif siidaan yaadannoo dhaabate
Goota Oromoo kanniin akka Bakar Waaree seenaan saahuu yaadata
Siidaan yaadannoo gootota Oromoo yeroo weerara Mililiik Calanqotti woreegamaniif dhaabate. Bara 1887 Oromoon heddu falmaa biyyaafi mirga isaanii irratti woraana weeraraa Miniliikiin Baha Harargeetti dhumaatiin guddaan irra gaye. Dhumaatiin kuni hanga har’aatti Calii Calanqoo jedhamuun beekama.
Siidaan kuni bakka Oromoon kumaatamatti laakkawaman argamanitti Bitootessa 21, 2015 kan eebbifame.
Gootota woraana Miniliik ummata isaaniitti bane ufirraa qolachuu irratti seenaa guddaa galmeessan keessa inni hangafni Bakar Waareeti. Bakar Waaree hoogganaa woraana Raaba Doorii ture.
Bifuma wolfakkaatuun siidaan yaadannoo Oromoota yeroma wolfakkaatuti harka woraana weeraraa Miniliikitti harkaafi harma isaanii dhabaniif Aanolettis dhaabachuun isaa niyadatama. Gootota saba isaaniif jecha lubbuufi qaama isaanii qaalii kennan seenaan bara baraan yaadata.
siidaa yaadannoo calanqoo
Previous articleJilli ODF Oromiyaa seenee ture gara Awurooppaatti deebi’e
Next articleDr. Birhaanamasqal Abbabaa Sanyii: Afaan Oromoo Afaan hojii federaalaa ta’uu qaba